Heshiis Maanta laga Gaaray Colaadihii Gaalkacyo – Radio Daljir
Heshiis Maanta laga Gaaray Colaadihii Gaalkacyo
Diseembar 2, 2015 3:46 b 0
Somalia, December 02, 2015-(Daljir)_Wararka laga helayo magalo madaxda Gobalka Mudug ee Gaalkacyo ayaa sheegaya in weli ay socdaan shirar nabad iyo heshiisiin lagu dhex dhigayo mamuladda Puntland iyo Gal-Mudug oo dagaali ku dhexmaray magalada.
Wakiilo ka socda beesha caalamkka ayaa ku sugan magalada kuwaasoo u kala dab-qaadaya labada dhinac, sidoo kale Raâ€™iisul Wasaaraha ayaa labada mamul ku qanciyay inay ogolaadaan in heshiis qodobeysan laga gaaro xiisada Gaalkacyo oo saamayn ku yeelatay Hiigsiga 2016 ee Soomaaliya.
Wararka ayaa sheegaya in Raâ€™iisul Wasaare Cumar Cabdirashiid labada mamul ku qanciyay inay ku heshiiyaan in ciidamada la kala qado, xabadda la joojiyo, iyo shacabkii magalada ka barakacay dib loosoo celiyo maadama qaarkood ay ku dayacan yihiin banaanka magalada iyo tuulooyinka u dhow.
Xildhibaan Cabdi Barre Yuusuf Jibriil oo ka tirsan Baarlamaanka Soomaaliya ayaa sheegay in labada dhinac heshiis gaari doonaan wixii ka dhacayna magalada la dhamayn doono.
Laamaha Amniga Kenya oo Amarro Dul-Dhigtay xoogsatada Waqooyi Bari